Munaasabada Xuska Maalinta Caruurta Aduunka Oo Markii 9aad Dalka Itoobiya Lagu Xusay Xarunta DDSI Ee Caasimada Jigjiga. - Cakaara News
Jigjiga(CN) Khamiis.20.Nov.2014, xuskan munaasabada maalinta caruurta aduunka oo sanad walba laga xuso aduunka 20 ka November ayaa dalka Itoobiya looga dabaal dahayaa xuskii 9aad halka sidoo kale aduunkana maanta looga dabaal dagayo xuskii 25aad.
Haddaba xuska maalinta caruurta aduunka oo guud ahaan dalka siwayn looga xusay maanta ayaa waxaa munaasabada dabaaldaga ee dalka maanta lagu qabtay xarunta DDSI ee caasimada jigjiga.
Munaasabadan oo ahayd mid maal'mahan siwayn loogu diyaar garoobayay ayaa saaka si meeqaam sare ah uga dhacday hoolka shirarka ee SMCX. Waxaana ka soo qaybgalay masuuliyiin sare oo ay ugu horeeyaan madaxwayne ku xigeenka ahna wasiirka madaxtooyada DDSI marwo Sucaad Ahmed Faarax, wasiirada haweenka caruurta iyo dhalinyarada DDSI marwo Raxma Maxamuud Haybe, wasiirku xigeenka waxbarashada DDSI mudane Cabdi Geedi, iyo masuuliyiin kale oo heer deegaan ah.
Dhanka Federaalka waxaa ka socday wafti balaadhan oo uu horkacayay wasiir ku xigeenka wasaarada haweenka caruurta iyo dhalinyarada JDFI Mudane Alamu Mengistu, sidoo kale waxaa xafladan ka soo qaybgalay masuuliyiin sar sare oo ka socoday hay’adaha aan dawliga ahayn ee ka hawlgala dalka, boqolaal caruur ah oo ka socday dugsiyada kale duwan ee xarunta deegaanka.
Munaasabadan oo ahayd mid si aad u qurux badan loo soo agaasimay oo ay kooxaha fanka iyo suugaanta DDSI ku fureen heeso loogu tala galay munaasabadan ayaa waxa ugu horayntii khudban dheer oo ku qotonta xuska munaasabadan ku furtay madaxwayne ku xigeenka ahna wasiirada madaxtooyada DDSI marwo Sucaad Axmed Faarax.
Waxayna madaxwayne ku xigeenku si mug leh uga warbixisay ahmiyada ay maalintani u leedahay guud ahaanba caruurta aduunka kuwa Itoobiya iyo kuwa deegaanka, waxaa kale oo ay ka warbixisay dadaalka balaadhan ee dalkeena Itoobiya ugu jiro sidii loo dabar goyn lahaa saboolnimada iyo jahliga, islamarkaana loo gaadhilahaa horumar waaro oo aan soo noqod lahayn.
Waxaa kale oo ay madaxwayne ku xigeenku sheegtay in ay maalintani ahmiyada gaar ah u leedahay DDSI maadaamo oo ay tahay markii ugu horaysay ee xuskan lagu qabto deegaanka taasina ay muujinayso isbadalka horumarineed ee sanadihii ugu danbeeyay la soo hooyiyay.
Masuuliyiintii ka socoday heer federal oo ay masuuliyiin badani ka hadleen munaasabadan ayaa waxaa si balaadhan uga hadlay wasiir ku xigeenka wasaarada haweenka caruurta iyo dhalinyarada JDFI Ato Alamu Mingistu isaga oo ugu horayntii si balaadhan ugu mahad celiyay xukuumada DDSI iyo shacabkeedu sida qiimaha leh ee ay u diyaariyeen munaasabadan. Wuxuuna kawarbixiyay in caruurta oo wax la baraa ay tahay dadaalada lagaga midho dhalinayo dhimista saboolnimada iyo hayaanka hirgalinta horumar waara.
Wasiirada haweenka caruurta iyo dhalinyarada DDSI marwo Raxma Maxamuud Haybe ayaa sidoo kale munaasabadan ka soo jeedisay khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa, taasi oo ay ka mid ahaayeen ahmiyada ay leedahay maalintani xiliyadii la aas aasay iyo waliba ujeedooyinka loo aas aasay.
Sido kale waxa ay ka warantay wasiiradu ahmiyada ay leedahay in mudnaan gaar ah la siiyo caruurta iyo jihooyinka siyaasadeed iyo istaraatijiyadaha lagu horumarinayo xuquuqaha caruurta ee ay dajisteen dalkeena Itoobiya iyo deegaankeenuba si loo hirgaliyo dhamaan qorshayaasha horumarineed.
Masuuliyiin ka socday heer federal kuwa ka socday ha’yadaha aan dawliga ahayn iyo wasiir ku xigeenka waxbaradada DDSI oo iyaguna ka hadlay munaasabadaasi ayaa si balaadhan uga warbixiyay amiyada ay maalintani u leedahay guud ahaan caruurta aduunka.
Isku soo wada duub oo munaasabadan ayaa maanta si qurux badan loogu soo gabagabeeyay xarunta deegaanka waxaana xuskan maanta hal ku dhag looga dhigay: "Waxaa waajib ah in ay caruurtu helaan waxbarasho ku haboon oo tayo leh, xor ah si loo gaadho horumar waara".